यी चार राशीले निकै नै धन कमाउँछन् हेर्नुहोस् कतै तपाईको राशी त परेन ! – Hamrosandesh.com
यी चार राशीले निकै नै धन कमाउँछन् हेर्नुहोस् कतै तपाईको राशी त परेन !
विशेषगरी निम्न ४ राशी हुने मानिसले निकै धन कमाउने गर्छन् भनेर धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छः
१. वृष धनको सम्बन्ध दोस्रो र आठौं स्थानमा रहेका राशीसँग जोडिएको हुन्छ । यही भएर दोस्रो स्थानमा रहेको वृष राशी हुने मानिसले धन कमाउने योग बढी हुने गर्छ । वृष राशीको गुरू शुक्र भएका कारण पनि यो राशी हुने मानिसहरू आकर्षक र महंगा सामान किन्न सौखिन हुन्छन् । वृष राशी हुने मानिसहरू औसत वस्तुलाई त्यति मन पराउँदैनन् । शुक्र ग्रहलाई धन, विलासिता, तथा मोजमस्तीको सूचक पनि मानिन्छ । र यही कारण उनीहरू धन कमाउन निकै मेहेनत गर्ने र कमाउने अवसर खोज्ने गर्छन् । यो राशी हुने मानिसले परिश्रमको महत्व बुझ्नुका साथै मोजमस्ती पनि गर्छन् । साथै वृष राशी हुनेहरू निकै जिद्दी गर्ने र आफूले चाहेको कुरालाई पाएर नै छोड्ने प्रयास गर्छन् ।
२.वृश्चिक वृश्चिक राशी हुने व्यक्तिले भौतिक वस्तुप्रति बढी आशक्ति देखाउँछन् । महंगा सवारी साधन, महल, तथा वस्तुले यी मानिसलाई सधैं आकर्षित गरेका हुन्छन् । वृश्चिक राशी हुने मानिसहरू कुशल व्यापारी हुन्छन् । जीवन तथा संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अरूको भन्दा फरक हुने गर्छ ।
३. कर्कट कर्कट राशी हुने व्यत्तिहरू सधैं राम्रो अवसरको खोजीमा हुन्छन् । बढी भावुक हुने भएकाले आफन्त र परिवारलाई कसरी सुखी राख्ने भनेर सोचिरहेका हुन्छन् । परिवारको इच्छालाई कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा नै यी मानिसले बढी ध्यान दिएका हुन्छन् । यही गुणले गर्दा नै उनीहरू बढी मेहेनती हुने र आफ्नो सपनालाई पूरा गरेर छाड्छन् ।
४. सिंह सिंह राशी हुने मानिसले आफूलाई अरूभन्दा फरक बनाउन खोज्छन् । अरू मानिसले आफूलाई ध्यान देऊन्, आफ्नो प्रशंसा गरून् र आफूलाई आदर्श मानून् भन्ने चाहना हुन्छ । यही भएर आफूसँग भएको क्षमता र गुण प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । नेतृत्व गर्ने विशेष क्षमता भएका यी मानिससँग ठूल्ठूला चाहना पनि हुन्छन् । महंगा सवारी साधनमा घुमफिर गर्न चाहने, महंगा मोबाइल प्रयोग गर्छन् । आफ्नो व्यक्तित्वले अरूको ध्यान तान्न खोज्छन् । यस्ता गुण भएका कारण नै उनीहरू धन कमाउन लालायित हुने गर्छन् र कमाउँछन् पनि ।
पुडासैनीको आत्मह’त्या : रविका भक्त–एक पेगमा बिकेका पत्रुकार !
सम्झना पौडेल । नुवाकोटका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्मह’त्या गरेसँगै त्यसमा नाम जोडिएका पात्रहरुको बिषयमा...
रविको श्रीमती निकिताले लेखिन् मनछुने स्टाटस : ‘तिमी निर्दोष छौ रवि’ …
पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्मह*त्या प्रकरणमा पक्राउ परेका कार्यक्रम प्रस्तोता रबि लामिछाकी श्रीमती निकिता पौडेलले...
‘रविजी पत्रकार नै होइन, उहाँलाई किन जबरजस्ती पत्रकार बनाईंदै छ ?’- किशोर श्रेष्ठ
काठमाडौं– प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष तथा पत्रकार किशोर श्रेष्ठले रवि लामिछाने पत्रकार नभएको बताएका...
मलेसियामा ४ नेपालीसहित ९४ जना अप्रवासी कामदार प्रहरीको हिरासतमा
मलेसिया १७,असार । मलेसियामा अवैधानिक रुपमा बसी रोजगारदाता कम्पनीमा शरण लिएर काम गर्दै आइरहेका...
चीनमा समुन्द्री आँधीले २२ को मृत्यु, नदी थुनिएर बन्यो ताल
काठमाडौं, २६ साउन । चीनमा आएको शक्तिशाली समुन्द्री आँधीले मर्नेको संख्या २२ पुगेको छ...
पेट्रोल ट्याङ्कर विस्फोट, ६० जनाको मृत्यु
दिल्लीको सडकमा निकालियो सुष्मा स्वराजको अन्तिम यात्रा
भारतमा भएकाे बस दुर्घटनामा परी २९ जनाको निधन
फेरी गयो शक्तिशाली भूकम्प :ठुलो क्षती भएको आशंका